ဝါယာရှော့စ် ကြောင့် ဖြစ်သော မီးဘေး ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အချိန်သုံးမိနစ်ဖြင့် မဖြစ်မနေဖတ်ရှု့ပေးကြပါ…. - MM Live News
၀ါယာရှော့စ် ကြောင့် ဖြစ်သော မီးဘေး ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အချိန်သုံးမိနစ်ဖြင့် မဖြစ်မနေဖတ်ရှု့ပေးကြပါ….
November 25, 2019 MM Live
၀ါယာရှော့စ် မီးဘေး ကာကွယ်နည်း….
မြန်မာနိုင်ငံအနှံအပြားတွင် မီးလောင်းခြင်းများလေ့လာကြည့်ရာ ၀ါယာရှောစ် ကြောင့်အများဆုံးဖြစ်နေပါသည်။ဘာကြောင့် ၀ါယာရှောစ် ဖြစ်ရပါသလဲ ကျွန်တော် အတွေ့ကြုံနှင့်သိသလောက့်ရှင်းပြပါမည်။
တိုးတက့်လာသော လူနေမှု့အဆင်တန်း များ ၏ အဓိကသော့ချက့်တစ်ခုဖြစ်သော အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများ များပြားစွာ ယခု ငါးနှစ်အတွင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက့်လာပါသည် ။
ယခင် ကမိမိအိမ်တွင် သွယ်တန်းထားသော မီကြိုးများ ၏ ခံနိုင်ရည် ထက့် ယခု အိမ်တစ်အိမ်အတွင်း သုံးစွဲနေသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ Load ကပိုများနေသည်ကို သတိမထားမိကြပါ ။
မျိုးစုံသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုသာ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ၀ယ်ယူကြပြီး အိမ်အတွင်း သွယ်တန်းထားသော မီးကြိုးများကို လဲရန် မည်သူမျှ စိတ်မ၀င်စားကြပါ ပလပ်ပေါက့်ရှ်ိရင် ထိုးပြီးအသုံးပြုလိုရသည်ဆိုသော အတွေးများသာ မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူအများစုသိရှိကြပါသည် ။
ကန်ထရိုက့်တိုက့်များတွင်လည်း လျှပ်စစ် နှင့်ဆိုင်သော အမှားခံပစ္စည်းများ လိုအပ့်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည် ။အရေးကြီးဆုံးအချက့်က လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ပြိုင်ပြီး မသုံးစွဲပါနှင်…..
ဥပမာ ရေစက်မောင်းနေချိန် ဟင်းအိုး ထမင်းပေါင်းအိုး စသည်များ မသုံးပါနှင့် မီးပူတိုက့်နေချိန် ရေခဲသေတ္တာပိတ်ထားပါ မိမိအိမ်စတင် မီးကြိုးသွယ်တန်းစဉ်ကထက် ယခု လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ တိုးလာသည်ကို သိရှိရင် နားလည်သော လျှပ်စစ်ဝါယာရိန်းသမား နှင့် တိုင်ပင်ပြီး လိုအပ်သည့်မီးကြိုးများ ထပ်မံတပ့်ဆင်ပါ …
မီးကြိုးသုံးရာတွင့် (twin ) နှစ်ချောင်းပူးထားသောကြိုးများအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ရှားပါ (single) တစ်ချောင်းခြင်းသွယ်တန်းသော နည်းစနစ်ကိုအသုံပြုပေးပါ့ ကြိုးများကို ဖြစ်နိုင်လျှင် under ground သွယ်တန်းခြင်းများ ကို အတက်နိုင်ဆုံး မပြုလုပ့်ပါနှင့် …..
မျက်နှာကျက်များပေါ်တွင် သွယ်တန်းထားသော မီးကြိုးများကို စနစ်တစ်ကျ မီးပိုက်များထဲကို ထည့်ပြီးအသုံးပြုကြပါ တက်ကျွမ်းနားလည်သူနှင့် တိုင်ပင်ပြီး Load များလျှင့် ရှော့စ် ဖြစ်လျှင့် အလိုလျောက့် ဖြတ်ချမည့် Safety Breaker များ မိမိအိမ်တွင် တပ့်ဆင်ကြပါ ….
ပျက်စီးနေသော မီခလုပ့်များကို လဲလည်ကြပါ ဈေးနည်းသော မီးခလုပ့်များအသုံးပြုခြင်းရှောင်ကျဉ်ပါ ။ယခု တင်ပြသောအရာများသည် ဆယ်နှစ်တာ လျှပ့်စစ်ဝါယာရိန်း သမားအဖြစ် ရပ်တည်လာသော ကျွန်ုပ်၏ အတွေ့ကြုံများဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ် ရန် အသိပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယခုလိုအသိများသိရှိပြီးချိန်တွင် မိမိအိမ်အတွင်းမီးကြိုးများလဲသင့်မလဲသင့် လိုအပ်သော အမှားခံပစ္စည်းများရှိမရှိ သိရအောင် လျှပ်စစ်နားလည်တက်ကျွမ်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပြီ ၀ါယာရှောစ်မှဖြစ်သော မီးဘေးအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်လိုက့်ကြရအောင်။Myo Nyi Aung / ထက်မြက်အောင်
၀ါယာရှော့ဈ မီးဘေး ကာကှယျနညျး….
မွနျမာနိုငျငံအနှံအပွားတှငျ မီးလောငျးခွငျးမြားလလေ့ာကွညျ့ရာ ၀ါယာရှောဈ ကွောငျ့အမြားဆုံးဖွဈနပေါသညျ။ဘာကွောငျ့ ၀ါယာရှောဈ ဖွဈရပါသလဲ ကြှနျတျော အတှကွေုံ့နှငျ့သိသလောကျ့ရှငျးပွပါမညျ။
တိုးတကျ့လာသော လူနမှေု့အဆငျတနျး မြား ၏ အဓိကသော့ခကျြ့တဈခုဖွဈသော အိမျတှငျးလြှပျစဈအသုံးဆောငျပစ်စညျးမြား မြားပွားစှာ ယခု ငါးနှဈအတှငျ့ မွနျမာနိုငျငံအတှငျးသို့ ဝငျရောကျ့လာပါသညျ ။
ယခငျ ကမိမိအိမျတှငျ သှယျတနျးထားသော မီကွိုးမြား ၏ ခံနိုငျရညျ ထကျ့ ယခု အိမျတဈအိမျအတှငျး သုံးစှဲနသေော လြှပျစဈပစ်စညျးမြား Load ကပိုမြားနသေညျကို သတိမထားမိကွပါ ။
မြိုးစုံသော လြှပျစဈပစ်စညျးမြားကိုသာ တဈခုပွီးတဈခု ဝယျယူကွပွီး အိမျအတှငျး သှယျတနျးထားသော မီးကွိုးမြားကို လဲရနျ မညျသူမြှ စိတျမဝငျစားကွပါ ပလပျပေါကျ့ရျှိရငျ ထိုးပွီးအသုံးပွုလိုရသညျဆိုသော အတှေးမြားသာ မွနျမာနိုငျငံပွညျသူအမြားစုသိရှိကွပါသညျ ။
ကနျထရိုကျ့တိုကျ့မြားတှငျလညျး လြှပျစဈ နှငျ့ဆိုငျသော အမှားခံပစ်စညျးမြား လိုအပျ့နသေညျကိုတှရေ့ပါသညျ ။အရေးကွီးဆုံးအခကျြ့က လြှပျစဈပစ်စညျးမြားကို ပွိုငျပွီး မသုံးစှဲပါနှငျ…..
ဥပမာ ရစေကျမောငျးနခြေိနျ ဟငျးအိုး ထမငျးပေါငျးအိုး စသညျမြား မသုံးပါနှငျ့ မီးပူတိုကျ့နခြေိနျ ရခေဲသတ်ေတာပိတျထားပါ မိမိအိမျစတငျ မီးကွိုးသှယျတနျးစဉျကထကျ ယခု လြှပျစဈပစ်စညျးမြား တိုးလာသညျကို သိရှိရငျ နားလညျသော လြှပျစဈဝါယာရိနျးသမား နှငျ့ တိုငျပငျပွီး လိုအပျသညျ့မီးကွိုးမြား ထပျမံတပျ့ဆငျပါ …
မီးကွိုးသုံးရာတှငျ့ (twin ) နှဈခြောငျးပူးထားသောကွိုးမြားအသုံးပွုခွငျးကိုရှောငျရှားပါ (single) တဈခြောငျးခွငျးသှယျတနျးသော နညျးစနဈကိုအသုံပွုပေးပါ့ ကွိုးမြားကို ဖွဈနိုငျလြှငျ under ground သှယျတနျးခွငျးမြား ကို အတကျနိုငျဆုံး မပွုလုပျ့ပါနှငျ့ …..
မကျြနှာကကျြမြားပျေါတှငျ သှယျတနျးထားသော မီးကွိုးမြားကို စနဈတဈကြ မီးပိုကျမြားထဲကို ထညျ့ပွီးအသုံးပွုကွပါ တကျကြှမျးနားလညျသူနှငျ့ တိုငျပငျပွီး Load မြားလြှငျ့ ရှော့ဈ ဖွဈလြှငျ့ အလိုလြောကျ့ ဖွတျခမြညျ့ Safety Breaker မြား မိမိအိမျတှငျ တပျ့ဆငျကွပါ ….
ပကျြစီးနသေော မီခလုပျ့မြားကို လဲလညျကွပါ စြေးနညျးသော မီးခလုပျ့မြားအသုံးပွုခွငျးရှောငျကဉျြပါ ။ယခု တငျပွသောအရာမြားသညျ ဆယျနှဈတာ လြှပျ့စဈဝါယာရိနျး သမားအဖွဈျ ရပျတညျလာသော ကြှနျုပျ၏ အတှကွေုံ့မြားဖွငျ့ ကွိုတငျကာကှယျ ရနျ အသိပေးခွငျးဖွဈပါသညျ။
ယခုလိုအသိမြားသိရှိပွီးခြိနျတှငျ မိမိအိမျအတှငျးမီးကွိုးမြားလဲသငျ့မလဲသငျ့ လိုအပျသော အမှားခံပစ်စညျးမြားရှိမရှိ သိရအောငျ လြှပျစဈနားလညျတကျကြှမျးသူနှငျ့ တိုငျပငျပွီ ၀ါယာရှောဈမှဖွဈသော မီးဘေးအန်တရာယျကို ကာကှယျလိုကျ့ကွရအောငျ။Myo Nyi Aung / ထကျမွကျအောငျ
ဝါယာရှော့ဈ ကွောငျ့ ဖွဈသော မီးဘေး ကာကှယျနိုငျဖို့ အခြိနျသုံးမိနဈဖွငျ့ မဖွဈမနဖေတျရှု့ပေးကွပါ….
(၇) ရကျကွာပြောကျဆုံးနပွေီး ပွနျတှခေဲ့တဲ့ မခယျြရီအောငျ ဖွဈစဉျမှနျမြား
အာရှနိုင်ငံအများကြီးရှိတဲ့ အထဲမှာမှ အကျင့်ပျက်ဆုံးနှင့် လာဘ်စားမှုအများဆုံးနိုင်ငံစာရင်း
January 25, 2019 MM Live News
မိန်းကလေးများရဲ့ဘဝကို ပျက်စီးသွားစေနိုင်တဲ့ “ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တို့ဆေး…..
April 22, 2019 MM Live
December 3, 2018 MM Live News